Wedzera Featured Image Post Thumbnail kune Yako WordPress RSS Feed | Martech Zone
Wedzera Featured Image Post Thumbnail kune Yako WordPress RSS Feed
Mugovera, July 5, 2014 Mugovera, July 5, 2014 Douglas Karr
Isu tave tichisimudzira vatsigiri vedu uye zvemukati nguva pfupi yadarika Taboola, yepuratifomu yekusimudzira chikuva uko feed yedu inoverengwa uye zvinyorwa zvinoenderana pane zvimwe zvakakosha zvinyorwa muwebhu rese. Isu tiri kufara neyakaganhurirwa kutonga pamusoro pekugovera uye mutengo pamutungamiri kuburikidza nechirongwa - pamwe nevashandi vavo vanga vakanaka.
Takatamira ku Taboola mushure mekushandisa rimwe basa iro netsaona rakazvidza bhajeti yedu uyezve raida kuti isu tibhadhare madhora zviuru gumi zvavakatipa. Zvichida chikamu chakaipisisa ndechekuti imwe yenyaya dzavaida kuti tibhadhare kusimudzira pairi yaive chinyorwa nezvavo! Umm… kwete.
Imwe mukana weTaboola yaive yekuti taigona kushandisa zvese zvinyorwa zvinyorwa zvataishuvira kusimudzira pamwe nekushandisa chikafu chedu kuti tirambe tichisimudzira zvinyorwa zvedu zvitsva. Kwakanakisa chaizvo. Izvi zvinoreva kuti tinogona kusimudzira zvinyorwa nezvevatsigiri vedu, zvinyorwa zvedu zvinozivikanwa, uyezve nekutora traffic pazvinyorwa zvichangoburwa.
Sezvineiwo, kunyangwe iwe uchigonesa yakaratidza mifananidzo muWordPress, izvo hazvichinje iyo RSS feed yeiyo yako WordPress blog kuisa iwo iwo zvigunwe mune yako RSS Kudya. Ini ndinofunga iwo mukaha mukushanda kunodiwa neWordPress, asi panguva ino pane mhinduro!
Ladislav Soukup yakagadzira plugin inonzi SB RSS Kudya Zvakawedzera izvo zvinoita kuti iwe ugone kuposita yako post thumbnail zvakanaka kushandisa chaiyo RSS Kudya midhiya: zvemukati uye yekuvharira kumaka. Isa uye gadzirisa iyo plugin uye iwe unogona kudoma mufananidzo pamwe nemamwe maparameter ekuwedzera.
Tags: yakavharwafeed thumbnailLadislav Soukupmedia contentpost thumbnail mune chikafurss feedrss feed yakaratidzwa mufananidzorss feed thumbnailrss thumbnailsb rss feed kuwedzera
Iwe Unoshandisa 83 Mazuva pagore Emailing
Kuri Kushambadzira Chaiko Kuchinja Zvakanyanya?
Apr 16, 2016 pa 10: 11 AM
Kwaive kurwadza kwemusoro kuona ma RSS-to-email emushandirapamwe pasina mifananidzo nekuti RSS feed yanga isina tag inodiwa yekudhonza mifananidzo kubva. Kunyange zvakadaro, yakashandura mafaira.php uye ikozvino MailChimp inogona kukwevera zvikamu zvinodiwa uye zvino maemail anotarisa akanaka.
Nekudaro, iyo mifananidzo iri muRSS feed inotaridzika chaizvo uye inoshuvira kuigadzirisa kuti isaizi yakakodzera. Inoda kutsvaga zvakanyanya uye kuwana mhinduro yeizvi.